Wona iyo Raibhurari dhairekitori, yakavanzwa nekutadza muMacOS Sierra | Ndinobva mac
Wona iyo Raibhurari dhairekitori, yakavanzwa nekutadza muMacOS Sierra
Vazhinji vashandisi, vanokurudzirwa neMac mushandisi, sarudza kuchinjira kune Apple komputa. Ivo vanowanzo tsvaga kuenderana, ne software uye Hardware yakagadzirirwa kuti isangane neumwe neumwe. Vagadziri veMacOS vanoziva izvi uye Ivo vanoedza kugadzira iyo yekushandisa sisitimu inoshanda uye yakapusa kune vashandisi vanotanga rwendo rwavo neMac yavo yekutanga.
Nokutadza, mushandisi weWindows anogara achiwana iwo maforodha esistimu. MuMacOS, kana iwe usingazive zvakadzama, unogona kugadzirisa chimwe chinhu chausingafanire kuita se: kudzima mafaera, kana kufambisa maforodha kunzvimbo dzisiri idzo, nezvimwe.
Pamwe nekuda kwechikonzero ichi, mune yazvino vhezheni yeMacOS Sierra, raibhurari folda yakavanzwa by default. Chekutanga pane zvese, ndikuudze kuti munhu akajairika mushandisi haazorasikirwa nefaira riri mubvunzo, asi mushandisi wepamberi uyo anoda kuziva kana kudzima ruzivo kubva ku hard disk, angangoda kuwana kwariri. Iyo dhairekitori ine data rekutsigira data, cache uye mafaira aunofarira.
Naizvozvo, iyo folda yakavanzwa, nekuti hatigone kuiwana mune yayo yakajairwa menyu: mune yepamusoro menyu, "Go" menyu.
Kuti tiuwane isu tinofanirwa kuita chiito ichi:
Mune iyo Finder menyu, tinya pa «Go».
Kamwe iyo menyu ichiratidzwa, isu tinofanirwa kudzvanya iyo «Alt» kiyi semashiripiti, iyo raibhurari sarudzo inowoneka, pakati chaipo pemenu
Fambisa usingasunungure iyo cursor kune basa uye iwe uchaona kuti iwe unopinda sei dhairekitori remushandisi anoshanda.
Semazuva ese, isu tine keyboard pfupi izvo zvinotibvumidza isu kuti tisvike kubva kune anowana, zvakananga kuRaibhurari folda yemushandisi anoshanda. Iyi nzira pfupi yekhibhodi ndeiyi: Raira + Shift + L.
Uye pakupedzisira, kana isu tichida kugara tiine raibhurari sarudzo inoonekwa mune ye "Go" basa reiyo Tsvaga, tinogona kuimisa, nekuda kwerubatsiro rwe terminal. Mune ino kesi, rairo yekuraira yekunyora ndeinotevera:
chflags dzakavanzika ~ / Raibhurari /
Semazuva ese, tinokurudzira kuti iwe usabata chero chinhu muRaibhurari folda, kunze kwekunge uine chokwadi cheichi chiito
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Wona iyo Raibhurari dhairekitori, yakavanzwa nekutadza muMacOS Sierra
Ndakaedza kuona dhairekita nekudzvanya Wing uye chinhu chega chinoitika ndechekuti iyo Command icon inowedzerwa pamberi peChinze folda. Kubva pane Raibhurari dhairekitori kana nhau nezano iri. Ini ndinongoiwana chete nekhibhodi nzira.
Errata kumashoko apfuura: Verenga Alt, kwete Ala.
Right, izvo zvaunotaura zvinoitika mune nyowani nyowani kusvika 10.12.2.
Manheru akanaka, ndatenda nemupiro.
Ndinoda kuti Raibhurari iratidzike nguva dzose, asi iwo murairo: "chflags nohidden ~ / Library /" haishande kwandiri muTerminal. Ndakaedza kushandura Raibhurari kuenda Raibhurari, Raibhurari ... uye hapana
Kwaziso nekutenda kumberi.
Omar meneses akadaro
Chokwadi. Izvo zvakanyorwa muchinyorwa chino hazvishande.
Pindura Omar Meneses
MaAirPods atove pakati pedu, emanuwo mabhuku
Sekureva kwaApple, maBeatsX mahedhifoni anozosvika muna Kukadzi